घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू फ्रेनकी डे जोंग बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबै जङ्गको रूपमा चिनिन्छ। हाम्रो Frenkie de Jong बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाहरु को एक पूर्ण खाता को आफ्नो बचपन को समय सम्म ल्याउन। विश्लेषणमा आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि भएको छ।
हो, सबैले मिडफील्डमा तिनको बहुमुखीतालाई थाहा छ। तथापि, केवल केहि विचार Frenkie de Jong को जीवनी जो एकदम रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
Frenkie डी जोंग 12 मा जन्मिएको थियोth नीदरल्याण्डको एक्सएनएनएमएक्सको अर्केलमा नेदरल्यान्डमा, त्यही ब्राजिल फुटबल स्टार भन्नुहुन्छ मार्सेलो जन्मेको। युवा फ्रेनकी एक आमालाई जन्मिएको थियो जो फुटबल खेल्ने र आफ्नो बुबा जॉन पनि एक शौकिया फुटबलर थिए जसले एएसवी आर्केलको पहिलो टोलीलाई खेले। यसको अतिरिक्त, फ्रेनकिईको दादा एक शौकिया फुटबलर थियो जबकि उनको साना भाइ, यूरी एएसवीएक्सएक्सएक्सएक्स को लागी खेल्छन्।
फ्रान्की आफ्नो गृहनगर टोली एएसवी आर्केलमा फुटबल खेलिरहेको हुनाले उनीहरूको खेलकुद मायालु आमाबाबुलाई आनन्दित तुल्याउन जसले खेलमा आफ्नो रुचिको प्रशंसा गरे। डच प्लेयरको अनुसार:
"म सधैं फुटबल साथी साथीसँग खेल्दै थिएँ। यो एक खेल थियो जब मैले खेल्ने म पनि स्कूलमा जाने गर्नुभएन "
फेन्डिकी फुटबल खेलिरहेको थियो, एक अत्यन्तै जवान उमेरमा, राम्रो प्रतिष्ठित अकादमीहरूको रुचि थियो जसले उहाँलाई आफ्नो स्थानीय क्लबबाट लिने प्रयास गर्यो, एक तथ्यले तिनका पिताले स्पष्ट रूपमा निम्न तरिकाले यस्तो लेखे:
"स्काउट्स पहिले नै ढोकामा थिए जब फ्र्रेनकी पाँच वर्षको थियो।"
यसअघि, क्यारियर बिल्डअप
जवान गोरा कपालको बच्चा मात्र सात थियो जब तिनका पिताले उनलाई सोचेका थिए कि उनीसंग प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धात्मक फुटबलको उमेरमा आए। त्यस अन्तमा, फ्रेनकिई वर्ष 2004 मा भएको थियो, डच ज्याइन्स फिइनेनेर्ड र मिड-टेबल क्लब विल्लम II मा परीक्षणको लागी। फुटबल कसरत दुवै ट्रेलहरूमा सफल थियो र स्वतन्त्रता एक पक्ष चुनेको थियो।
यद्यपि धेरै जवानहरू, फ्रेनकोर्डले फेनेनोर्डमा मिड-टेबल क्लब विल्लम II लाई सहभागी गरे। छनोटको रूपमा अचानक उनको परिवारको तथ्य यो तथ्य हो कि उनीहरु मर्दा-फरिनेर्ड समर्थक समर्थक थिए। यद्यपि, यो लामो समयसम्म डच द्वारा सोच्ने सिद्ध साबित भएको छ।
यो विल्लम II को जवान प्रणालीहरुमा थियो कि फ्र्रेनकि उनको निर्माण शैली को विशेषताहरु लाई फ्रेनकिई र विकसित गरेको छ जसमा सबै भन्दा कठिन चीजहरु को कठिन बनाउन को लागी हास्यास्पद आसान लग रहेको छ।
महत्वाकांक्षी जवानले क्लबको पङ्क्तिको माध्यमबाट आफ्नो स्तरमा विभिन्न स्तरमा विशेष गरी विलियम II को अन्तर्गत- 15 कोच, जोस बोगर्स जो आफ्नो घडीबाट पारित प्राकृतिक प्रतिभा बोल्न बन्द नहोला।
"मेरो विलियम II वेबसाइटको लागि एक साक्षात्कार थियो र मेरो मनपर्ने खेलाडिको बारेमा सोधियो। जाहिर छ, धेरै कोचहरू क्रिस्टियानो रोनाल्डो वा लियो मेस्सी नाम छ, तर मैले फ्र्रेनकी डे जोंगलाई भने, "बोगर्सले बताए। उहाँ प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट थियो। त्यो प्राकृतिक प्रतिभा हो। केहि मान्छे एक निश्चित स्तर सम्म पुग्न धेरै काम गर्न को लागि, तर फ्रेनकी को आफ्नो गुणवत्ता को प्रदर्शन को प्रशिक्षित गर्न को लागि नहीं थियो। "
Frenkie को प्रभावशाली शुरुवात को बारे मा बोगर्स नोट्स।
विल्लम II को सम्पूर्ण युवा प्रणालीको लागि खेल्न पछि, फ्रेनकीले आफ्नो एरिडिभाइलाई पहिले 10 मा बनाउनु भयो।th 2015 को एक म्याच को लागी कि उनको 1-0 घर जीत मा उनको पक्ष हार एडीओ डेन ह्याग को देखा।
उनको सफल शुरुआत पछि, केहि क्लबहरूले अज्याक्स र पीएसवी सहितका सेवाहरू सुरक्षित गर्न खोजे। फ्रेनकी, तथापि, 2015 को गर्मी मा क्लब संग एक चार साल को अनुबंध गायन, अजक्स को लागि बसें।
अज्याक्स फ्रेनकिईमा क्लबको रिजर्भको साथ राखिएको थियो - जोंग अजाक्सले उनलाई उत्कृष्ट असर पारेका थिए जसले उनलाई 2016 मा क्लबको वरिष्ठ पक्षमा प्रगति गरे। वरिष्ठ पक्षमा पदोन्नति प्राप्त गर्दा, फ्रेनकीले आफ्नो 2017 यूरोपा लीग फाइनलमा फाइनलमा सहयोग पुर्याए, एक विकासले अरूले उनलाई क्वालिलर लीगको सिजन अवार्डको क्लिनिक क्लियर गरे।
नतीजाको रूपमा, फ्रेनकीले मैनचेस्टर युनाइटेड, मन्चेस्टर सिटी, टोटेनम्याम, रियल म्याड्रिड, बार्सिलोना र पीएसजी सहित शीर्ष क्लबहरू द्वारा लिखित प्रयास गरिसकेका छन जसले बोलपत्र बनाएर उनको रिपोर्टमा उनको चासो संकेत गरे। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Frenkie उहाँको सुन्दर प्रेमिकासँग Mikky Kiemeney रूपमा चिनिने सम्बन्धमा रहेको छ। प्रेमिकाहरू भेटिए र फ्र्रेनकी अझै विल्ल द्वितीयको जवान प्रणालीसँग भएको बेला एक सम्बन्ध सुरु गरे।
Mikky खेलकुद को एक प्रेमी हो जो हॉकी खेलिन्छ। जवान युगलहरू एम्स्टर्डममा सँगसँगै बस्छन्।
एक धेरै कारकहरु मध्ये एक जो कि जोडीहरु को सम्बन्ध को उत्सव बनाउन सक्छ तथ्य यो छ कि उनि एक नै मुस्कान को साझा गर्छन। के तिनीहरू एक आदर्श जोडी छैनन्?
यसअघि, बार्सिलोनाको लागि प्रेम
फ्रान्सकीले आफ्नो प्रेमिकालाई भेट्नुभन्दा पहिले बार्सिलोनासँगको प्रेममा पराजित गर्यो। डच अप्ठ्यारो भएन मात्र स्पेनी छेउमा तर यसको तारा खेलाडीहरू।
"Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, पिक, डानी एल्व्स, Pedro, Messi, Eto'o, विला। कस्तो दल! Guardiola's टोली सबै भन्दा राम्रो थियो। उनीहरूलाई हेर्नको लागी एक आनन्द थियो, तर म डराउने सपना देखेर खेल्न चाहन्छु। "
हालको बार्सिलोना स्टारको लागि फरेन्कीको प्रेम विशेष रुचि छ लिओनेल मेस्सी जसलाई उसले कुनै दिन खेलिरहेको सपना देख्छ।
निस्सन्देह, म मेस्सीसँग खेल्न चाहन्छु। तर उहाँ लगभग 31 हुनुहुन्छ, मलाई छिटो (हँसिन्छ) चाहिन्छ। मलाई पछाडी सम्झँदा मेरो सानो दाजुभाइले मलाई मलाई उज्ज्वल हरी बार्सिलोना किटलाई पछाडि मेस्सीको साथ दिए। मैले यो शर्ट पहनें जब सम्म मेरो लागि धेरै सानो भयो। "
खैर, बार्सिलोना यस पोष्ट लेखन को रूप मा उनको हस्ताक्षर प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै उनको विचार भन्दा धेरै नजिक छन्।
यसअघि, व्यक्तिगत जीवन तथ्य
Frenkie एक उपयुक्त फुटबलर हो जसले कहिल्यै आफ्नो जडको पहिचान गर्न असफल भएन। यद्यपि उनी अज्याक्समा फुटबल खेल्छन् र एम्स्टर्डममा बस्छन् उहाँ हप्तामा दुई पटक आफ्नो गृहनगरमा बारम्बार हेर्नुहुन्छ।
आफ्नो जीवन शैलीको सन्दर्भमा, उहाँ गैर-भौतिकवादी हुनुहुन्छ र महंगे लुगा वा अन्य सामानहरूको लागि धेरै ख्याल राख्दैन। फ्लिप साइडमा, फ्र्रेनकी जिद्दी हुन सक्छ, स्वामित्व र असम्भव।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो फ्र्रेनकी डे जोंग बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।